Pineapple waa warshad kulaylaha ah in la aaminsan yahay in ay ~ Jasa Buat Web MLM Desain
Pineapple waa warshad kulaylaha ah in la aaminsan yahay in ay
05.03 Juragan Channel No comments
Pineapple waa warsHotel Murah Di Jakarta had kulaylaha ah in la aaminsan yahay in ay ka yimaadaan Laatiin America . Intaa waxaa dheer in ay South America , waqtigan waxa kale oo badan oo miro cananaaska beerayaa Central America , Hawaii , Puerto Rico , California iyo Florida , iyo sidoo kale dalalka kale ee kulaylaha ah , sida Indonesia iyo Thailand . Dhirta Pineapple ay awoodaan in ay koraan in ay height a of 5 ilaa 6 feet . Dhirta Pineapple waxay muddo dheer , caleemaha pointy yihiin , dhogortoodu by wax dhuuban leh oo xasilan oo gaaban afkoda . Guud ahaan cananaaska koray in kulul , laakiin mararka qaarkood midhaha ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa mid laylan ee ku leh hawada yara qabow .
Pineapple u baahan yahay ciid wax yar Nakhla, si ay u koraan si ay awooddooda oo buuxda . Mid ka mid ah wax ka badan in uu yahay mid gaar ah oo ku saabsan miro cananaaska uu yahay in cananaaska in la abuuri karaa sida geedka ah ornamental weelka . Pineapple gadood iyo miro ama cylindrical iyo oranji ah hurdi . Tani waa sababta oo ah qaabka ofaalka of a qabanqaabada ubax ku muquuninta kaas oo kadibna u koray galay miro hal fareeshka ah . Waxaa jira noocyo badan oo cananaaska waxaa laga heli karaa iyo qaar ka mid ah iyaga waa kuwa aan si fiican u yaqaan waa cayenne ah , Red Isbaanish , Peranambuca , Christmas Queen , Abakka . In Indonesia , dhulka gobolada dhexe waa meel cananaaska - soo saarida in caan ku tahay in ay Pineapple Subang Subang .
Sida loo beeri Pineapple a
Ka dib markii barashada wax yar oo ku saabsan miro cananaaska ah , ha na isku dayaan si fiican oo ku saabsan sida ay u k Kuliner Balikpapan oraan iyaga u gaar ah cananaaska miro in ay ogaadaan . Tilmaamahan aan la loogu talagalay dhirta cananaaska on an beeraha qiyaasta warshadaha , laakiin waxaa la koobna hiwaayadaha ee keligaa aad beerta ka .
Dhab ahaantii sida ay u koraan cananaaska ah ma aha mid aad u adag tahay in la sameeyo inta aad u leeyihiin meel u furan oo ay la fara badan qorax . Tallaabada ugu horreysa la sameeyo waa in a miro cananaaska oo tayo fiican leh ka soo iibsadaan suuqa maxaliga ah . Waxaad dooran kartaa nooc kasta oo aad jeceshahay . Marka aad ka iibsan cananaaska ah , hubi in midhuhu soo bislaadaan oo taajka on top of midhaha dhawrsan . Iska ilaali iibsashada cananaaska ah in uu leeyahay wax taaj oo qudhmay oo ama caaryaysatay leh caleemo brown . Qaybo u gaar ah oo ah taajka iyo hilibka . Ka saar caleemo qaar ka mid ah xagga hoose ka dibna iska dhigeen ugu yaraan hal toddobaad , ka fog iftiinka qoraxda . Hubi in aad qalajiso ka hor kaydinta , sababtoo ah markii ay xaaladdu waa qoyan , ka dibna abuurka cananaaska si fudud waa qudhmi doonaa .
Wixii dhexdhexaad ah beerto ee waxaad isticmaali kartaa Warbaahinta ciidda dabacsan isku qasan ciid . Comparison u dhexeeya ciidda iyo ciid jeediyey waa 3 : 1 . Weel qaado oo dhexdhexaad ah size leh godod ka hooseysa . Dabool daloolka wax u eg dhuxusha ama tiradii lebenkii oo bannaan . Dheriga Buuxi oo ciid iyo Mall di Jakartaciid isku dar ah oo god xarunta u ah abuurka beerto cananaaska sameeyo . Dheriga meel qorraxda iyo si joogto ah uga nadiifino 3-7 maalmood . Ha noqon waraabinta aad u soo noqnoqda , sababta oo ah warshad uu daciifin doonto iyo qudhunku biyo aad u badan . Dhirta Pineapple koraan si tartiib ah , sidaa darteed ma filan si aad u aragto waxa midho u dhali waayo ku saabsan 2 ilaa 3 sano . Mustaqbalka , waxay isticmaalaan bacriminta ah 3-4 bilood kasta si ay u taageeraan koritaankiisu . Sida midhaha koraa size iyo isbedelka midab cagaar oo si caajis jaalle ah oo gogo ' , cananaaska weheliyaan asliga ah mindi af .
Waxaa laga yaabaa in aan awood u yeelan doonaan in ay ka heli doonaan midhihii cananaaska ee lagu iibiyo suuqa aad . Laakiin qanacsanaanta iyo barxadda gudaha ah in aad u koraan karo warshad cananaaska ah iyo miro waa raaxo ah in Bintaro Xchange Mall aan la qiyaasi karin . Waa hagaag , hadda aad u ogaato sida ay u aasaan cananaaska . No more Sug , fadlan la diyaariyo wax kasta oo rajaynaynaa in aad ku raaxaysan doonaa miraha kulaylaha waa mid aad u dhadhan fiican leh